3 Qof Oo Ku Dhintay Iska Horimaad Ka Dhacay Magaalada Ceerigaabo | FooreNews
Home wararka 3 Qof Oo Ku Dhintay Iska Horimaad Ka Dhacay Magaalada Ceerigaabo
3 Qof Oo Ku Dhintay Iska Horimaad Ka Dhacay Magaalada Ceerigaabo
FoorenewsNov 06, 2011wararka0
Ceerigaabo-(Foorenews)- Sedex qof ayaa galabta ku dhintay magaalda Ceerigaabo ee Xarunta Gobolka Sanaag, kadib markii dablay hubaysan oo ka soo jeeda beesha koonfurta Sanaag ay soo weerareen xubno ka mid ah gudidii xukuumadu u xilsaartay xal u helida shaqaaqooyinkii ka dhacay Magaalada Ceerigaabo ) oo la shirayay odayaal iyo waxgaradka beesha Dhulbahante ee Gobolka Sanaag.
Xubnaha gudida xukuumadu u xil saartay xalinta shaqaaqooyinka Gobolka Sanaag ee shirkaas lagu soo weeraray waxay kala ahaayeen Wasiirka Warfaafinta Mud. Axmed Cabdi Xaabsade iyo Taliyaha Ciidanka Asluubta Mud. Maxamed Xuseen Faarax (Xiirane) kuwaas oo ka soo jeeda beelaha Dhulbante.
Sedexda qof ee falkan weerarka ah ku dhintay ayaa kala ahaa 2 askari oo ka tirsan ciidanka qaranka iyo gabadh rayid ah oo halkaas maraysay, waxa kale oo falkaasi ku dhaawacmay 4 askari oo ka tirsan ciidanka qaranka.
Ciidanka Qaranku waxay gacanta ku soo dhigeen 5 ka mid ah dablaydii falkan gaysatay.
Kooxdan weerarka soo qaaday ayaa ciidanka qaranka ka soo rasaasaynayay mudo 2 saac ka badan daaqadaha qaar ka mid ah guryo ku yaalay magaalada Ceerigaabo.
Wasiirka Arimaha Gudaha Mud. Maxamed Nuur Caraale (Duur) oo hogaaminayay waftiga uu kusimaha madaxwaynaha Somaliland ahna Madaxwayne ku Xigeenka Mud. Cabdiraxmaan Saylici u magacaabay daminta iyo xal u helida shaqaaqooyinka gobolka Sanaag, ayaa galabta shir jaraa’id oo uu ku qabtay Magaalada Ceerigaabo ku sheegay in ciidamada qaranku ay dhirbaaxo kulul ku dhufan doonaan wax uu ku tilmaamay dadka nabad-diid ah ee carqaladaynaya amaanka gobolka Sanaag.
Wasiirku waxa uu sheegay in aanay dhacdadani ka hor istaagi doonin sii ambo qaadka heshiisiinta iyo xalinta beelaha walaalaha ah.
Previous PostWaxgaradka iyo odayaasha Deeganka Dilla Oo Bayaan culus ka soo saaray Hadalo ka soo Yeedhay koox qurbo joog ah Next PostWasiirka Arrimaha Gudaha oo amar ku bixiyay in la Toogto dadka Ra'idka ah ee Hubaysan